Blog - Nivona 830 Automatic Coffee Machine အသုံးပြုပုံ Golden Brown Coffee
/ Nivona 830 Automatic Coffee Machine အသုံးပြုပုံ
A : Text Display (စခရင်ခွက်)
B : အဓိကညွှန်ကြားချက်များကိုရွှေ့ ပြောင်းစေနိူင်မည့် ခလုတ်
C : စတင်စေသည့် ခလုတ် (Play button)
D : ပယ်ဖျက်ချရန် (အထွက်ခလုတ် Exit button)
E : စက်အတွင်းမှ ကော်ဖီကျလာသည့်ပိုက်ကို adjust လုပ်လို့ ရန်
F : ရေထည့်ရန် box
G : ကော်ဖီစေ့ထည့်ရန် box
H : အဓိကမိန်းခလုတ်
I : အဖွင့်အပိတ် ခလုတ်
J : ကော်ဖီခွက် တင်ရန် plate
K : ထို plate ကိုကော်ဖီခွက်နွေးဖို့ အတွက် ထပ်မံအသုံးပြုလို့ ရပါသေးတယ်
L : ကော်ဖီစက်အတွင်းပိုင်းကိုလိုအပ်သည့်အခါ ဖြုတ်တပ်ဆင်ရန် ဖွင့်ကြည့်ဖို့ အတွက် အဖုံးကို slide အနေအထားဖြင့် ပိတ်ထားသည့် အပေါက်
M :ကော်ဖီအမှုန့် ထည့်ရန် နေရာတစ်ခုပါရှိ (တစ်ခွက်စာသာဆန့် )
N : Waste ဖစ်သွားတဲ့ ရေတွေ ရေနွေးတွေအတွက် အကန့် ပုံသဏ္ဍန်ရှိသောမြောင်း
O :ကော်ဖီစက်ရဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေ မြုတ်နှံထားတဲ့နေရာပါ
P : ကော်ဖီခွက် ခံဇံကာပါရှိသော plate
Q : ထိုအဖုံးအနောက်တွင် Roller ပါရှိ ..
S :ကော်ဖီစက်မှာအသုံးပြုပီးသားကော်ဖီအမှုန့် များရေနွေးများကိုထိုအံကပ်ဖွင့်ကြည့်လျှင်တွေ့ မြင်နိူင် .. ဖြုတ်လို့ ရပါသည် ။
T : ပါဝါ ကျိုး အပါအ၀င် တခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအချို့ ရှိသည့်နေရာ
U : နိူ့ဗူးအတွက် အအေးခံဗူး … အထဲတွင်း နိူ့ ရည်ထည့်ထားခြင်းဖြင့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအသုံးပြုနိူင် ။
ပထမဆုံးကော်ဖီစက်ရဲ့ဘယ်ဖက်ခြမ်းတွင် power on/off ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ ..
ပြီးလျှင် ကော်ဖီစက် အပေါ်တွင် Power ခလုတ်ကိုထပ်မံဖွင့်ပါ ..
စက္ကန့် အနည်းငယ်မျှ စောင့်ပြီးလျှင် Boiler heating ကိုစက်မှ အလိုလျောက်ပြုလုပ်နေပါလိမ့်မည်
ထို့ နောက် စက်ကိုအသင့်အသုံးပြုလို့ ရသည့်အနေအထားကိုရောက်သည်အခါ
Home screen တွင် function များပေါ်လာပါလိမ့်မည် ..
Coffee ဖျော်နည်း (ဥပမာ - Espresso) ပထမဆုံးပုံမှာပြထားတဲ့ အနီရောင်လေးနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ Espresso iconလေးကို နှိပ်ပါ …
ထို့ နောက် မိမိထည့်လို့ သည့်ကော်ဖီပမာဏကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလျှင် အောက်မှာပြထားတဲ့
အစိမ်းရောင်နဲ့ ဝိုင်းထားသော > icon လေးကိုရွေ့ ပီးဖော်ပြပါ menu များကိုရွေးချယ်လို့ ရပါတယ် ..
ကော်ဖီစေ့ပုံသဏ္ဍန် အ၀ါရောင်လေးနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ ကော်ဖီပမာဏအတိုးအလျှော့ကိုတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ Wheel ခလုတ်လေးကိုအသုံးပြုပီးလိုတိုးလျှော့လို့ ရပါတယ် … ပြီးလျှင် 40mlကိုရွေးချယ်ဖို့ အတွက် အစိမ်းရောင် > ခလုတ်လေးကိုထပ်မံ နှိပ်ပါ ..mlအတိုးအလျှော့ကိုလဲ
Wheel နဲ့ ပဲရွေးချယ် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် .. Screen ရဲ့ညာဖက်ဒေါင့်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ 1 x Cup ပုံစံလေးကတော့ စက်မှ ကော်ဖီရည်ကျလာမယ့် ကော်ဖီခွက်ပမာဏကိုဖော်ပြထားတာပါ ..
ကော်ဖီဆိုရင် နှစ်ခွက်ကျအောင် Command ပေးလို့ ရပီ ..
နိူ့ နဲ့ တွဲတဲ့ ကော်ဖီအမျိုးအစားတွေဆိုရင် တစ်ခွက်ပဲကျလို့ ရပါမယ် …
ပြီးလျှင် အလည်မှာပါတဲ့ button လေးကို နှိပ်ပါ (အပြာရောင်လေး ၀ိုင်းထားပါတယ်)
ထို့ နောက်စက်မှာအလိုအလျောက် လည်ပါတ်နေပီးကော်ဖီကိုစတင်ဖျော်နေပါလိမ့်မည် ..
Home screen ပေါ်မှ Menu function များအကြောင်း
ပထမဆုံး Home Screen တွင် ပုံမှာပေါ်သည့်အတိုင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး
function ပုံပါအတိုင်းကော်ဖီအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဖျော်ခိုင်လို့ ရမှာပါ ..
အပေါ် ပထမဆုံးတန်းမှာစီထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်ပုံလေးတွေကတော့ ကော်ဖီအမျိုးအစားလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Menu function icon လေးတွေပါ .
တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူပါဝူး .. ပထမဆုံးခွက် အသေးလေးနဲ့ ပုံက Espresso ပါ
ဒုတိယသူ့ ထက် သာမာန်အနေအထား ကြီးနေတဲ့ပုံက Coffee Cream အတွက်ပါ
ပဉ္စမပုံကတော့ latte အတွက်ပါ
ဘယ်ဖက်ခြမ်းကပြောရမယ်ဆိုရင် ခွက်ပုံသံဏ္ဍန်လေးက Hot Milk အတွက်ပါ ..
ရေစက်လေး နှစ်စက်ကျနေတဲ့ ပုံကတော့ Hot Water ပါ ..
ကော်ဖီခွက်ပေါ်မှာ M ပါတဲ့ icon လေးကတော့ .. My Coffee ပါ ..
ကော်ဖီစက်အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကော်ဖီနှုန်းထားအတိုင်းကိုယ့်စိတ်ကြိုက် setting မှာပြုလုပ်ပီးအယ်ဒီ icon လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ရုံနဲ့ တင် ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီစေ့ ပမာဏ ၊ ကော်ဖီမှုန့် ပမာဏရေပမဏကို Memory မှတ်ထားပီးအမြဲတမ်းဖျောက်သောက်တဲ့အခါ အယ်ဒါလေးကိုရွေးချယ်ပေးရုံနဲ့ တင် ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သောက်လို့ ရအောင်အတွက် ပါ ..
ကျန်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကတော့ Tool Setting ဖြစ်ပီးကော်ဖီစက်ကို setting ချိန်းဖို့ အတွက်ပါ .
နောက်ဆုံးတစ်ခုiconကတော့ Coffee စက်ကို Cleaning လုပ်ဖို့ အတွက်ပါ
အယ်ဒီနောက်ဆုံး Cleaning function ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ..
Coffee စက်အတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအပါအ၀င် စက်တစ်စက်လုံးကိုပါ
ဆေးကျောသန့် စင်ဖို့ အတွက် function များပါဝင်ပါတယ် …
ဒါကတော့ Nivona 830 မှာပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီစေ့ထည့်တဲ့ Tank လေးပါ ညာဖက်အပေါ်မှာအဖုံးနဲ့ ရှိပါတယ်
အနီရောင် နဲ့ ဝိုင်းပြထားတာကတော့ Coffee beans ထည့်တဲ့အံခွက်ပါ .. 250g ဆန့် ပီး 200 လောက်ပဲထည့်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ..အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် .. ကော်ဖီစေ့နည်းနည်းလေးအသုံးပြုတဲ့အခါ .. Coffee Beans Tank အောက်မှာရှိတဲ့ Grinder က ပိုပီးအလုပ်ဖစ်ပါတယ် …
အပြာရောင်လေးနဲ့ ကတော့ ကော်ဖီအမှုန့် ထည့်တဲ့အံခွက်ပါ ..တစ်ခွက်စာလောက်ပဲထည့်လို့ ရပါတယ်
အမှုန့် ထည့်ဖို့ အတွက်သီးသန့် ပါ ….
Coffee Machine Cleaning ပြုလုပ်နည်း
ပထမဆုံး Setting Tool icon ဘေးနားမှ Cleaning icon ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီး ပုံမှပါတဲ့အတိုင်း
Cleaning ပြုလုပ်လို့ ရတဲ့5ချက်ကိုတွေ့ ရမှာပါ …
Rinse Frother (အတွင်းနိူ့ ပိုက်နဲ့ဆက်ထားသောနေရာကို ဆေးရန်) အနီရောင် ချယ်ထားသော နေရာမှ ပိုက်ကိုဖြုတ်ပြီး ခွက်တစ်ခွက် ခံထားရပါမယ် ..အတွင်းမှ ရေကို အပြင်သို့ မှုတ်ထုတ်မှာ ဖြစ်သဖြင့် .. ရေများထွက်ကျလာနိူင်သည်ကို သတိပြုပါ ။Rinse Frother ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် .. ရေသန့် တစ်ဗူးသော်လည်းကောင်း Hose Pipe ကို ဖြုတ်ပီးတပ်ပေးထားရမှာပါ … ထို့ နောက် အယ်ဒီ Menu ကိုရွေးချယ်ပီး ပြုလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်
စက်က သူ့ အလိုအလျောက် Hose Pipe ကို ဆေးကြောမှာဖြစ်ပါတယ် .. ရေသန့် ကို စုပ်ယူမူပြုလုပ်သည့်အဆင့်များ ပြီးဆုံးသွားလျှင် Rinse Frother Cleaning ပြုလုပ်ပြီးပါပြီ
Rinse Spout ဆိုတာကတော့ စက်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ ကော်ဖီဆင်းတဲ့ ပြွန်နဲ့ အခြား ကော်ဖီမှုန့် mixing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကို ဆေးကြောတဲ့ အပိုင်းပါ … ထို အပိုင်းကိုလဲ .. Setting Tool icon ကိုရွေးချယ်ပြီး
Rinse Spout ကို နှိပ်ပါ .. ထို့ နောက် Wheel button ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ထိုအခါ Coffee Machine မှ အလိုလျောက် လည်ပါတ်ပြီး ပြီးဆုံးသည်အထိ စောင့်ပေးပါ .. စက္ကန့် သုံးဆယ် လောက်သာ ကြာမြင်မည် .
Clean frother (အပြင်ပိုက်ကို စုပ်ယူပြီး ဆေးကြော)
Clean frother ကတော့ Hose Pipe ကို ဆေးကြောတဲ့ icon ပါ .. ပထမဆုံး Pipe ကို ပုံမှပြထားတဲ့အတိုင်း အနီရောင် ချယ်ထားသော နေရာမှ ပိုက်ကိုဖြုတ်ပြီး ရေသန့် ဗူးတစ်ဗူးထည့်သို့ ထည့်ထားရပါမယ် .. အပြင်မှ ရေကို အတွင်းကို စုပ်ယူမှာဖြစ်သဖြင့် ရေသန့် ဗူးထဲတွင် ရေရှိမှ ဖြစ်မည် ..
စက်တစ်ခုလုံးကို System ကျကျ အလုပ်လုပ်ပြီး စက်ထဲတွင် အလိုလျောက်ဆေးကြောသည့် အပိုင်းပါ
ထို icon ကို ရွေးချယ်ပြီး wheel button ကို နှိပ်လိုက်မည်ဆိုလျှင် စက်မှ အလိုအလျောက် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေမှာပါ အချိန်အားဖြင့် ဆယ်မိနစ်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ် ကြာမြင်ပြီး တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက်သာ
ဆေးလျင် သင့်တော်ပါသည် ။…
ဒီ icon ကို နှိပ်တဲ့အခါမှာ စက်မှ Espresso cleaning capsule or
cleaning tablet powder ကိုစက်၏ function screen ပေါ်တွင်တောင်းပါလိမ့်မည့်
ထို့ နောက် စက်အသုံးပြုသူမှ cleaning tablet or capsule များထည့်ရန်လိုပါသည် .
ပြီးလျှင် wheel button ကို နှိပ်ပြီး စက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးပြီးမြောက်သည်အထိ စောင့်ရန်လိုအပ်ပါသည် ..
အထက်ပါ cleaning system များအကြောင်းတွင်မိမိ လိုအပ်သည့် အပိုင်းကိုသာဆေးကြောသန့် စင်နိူင်ပြီး Clean System ကို မူ တစ်ပါတ်မှာ တစ်ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်လျှင်သင့်တော်ပြီး
Descale System ကတော့ သုံးလ တစ်ကြိမ်လောက်သာ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည် …
အမှတ် (6-A) သုစိတာလမ်း ၊ သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ ၊
သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ...